जापानले लक डाउन बिनै कसरी कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्यो ? – korea pati
June 3, 2020 Korea patiLeaveaComment on जापानले लक डाउन बिनै कसरी कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्यो ?
दुनिायाँभर कोरोना भाईरुसको संक्रमणको संख्या बढेसँगै यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अधिकांश देशहरुले लकडाउन र धेरै टेष्टमा जोड गरेका छन् ।
यस्तो रणनिति अपनाउँदा पनि कतिपय देशमा कोरोना भाईरसका संक्रमितको संख्या कम भएक छैनन् ।नेपालमै पनि लामो समयदेखि लक डाउन गरिरहे पनि पछिल्ला दिनहरुमा झन संक्रमितको संख्यामा बृद्धि भईरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको अहिलेसम्मको तथ्यांक २ लाखभन्दा बढि भईसकेको छ । २४ मार्चदेखि लकडाउन जारी गरिएपछि भारतमा संक्रमितको संख्यामा भने गिरावट आएको छैन । चैत १० बाट लकडाउन सुरु भएको नेपालमा पनि पटकपटक लक डाउन थपिएपछि संक्रमण भने बढि नै रहेको छ ।
यस्तोमा विश्वभर भने जापानी मोडल के हो जसले यति सजिलै कोरोना संक्रमणमाथि जीत हासिल गर्न सफल भयो भन्ने कुरा उठिरहेको छ । महामारीलाई फैलिनबाट रोक्न अमेरिका र रुसजस्ता ठूला र सम्पन्न देशहरु असफल हुँदा जापानले भने आफ्नो रणनिति अपनाएर सफल भएको छ ।स्वास्थ्यको स्तरलाई हेर्ने हो भने जापान विश्वभर दोस्रो तहमा पर्छ । २६ प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस जापानमा ६५ वर्षभन्दा माथिका छन् । यो उमेर समुह भनेको कोरोना संक्रमणबाट ज्यादा जोखिम हुने समुह भएको विश्वस्वास्थ्य संगठनले बताएको छ । तर, हालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा जापानमा १६ हजार ७ सय १६ मात्रै कोरोना संक्रमित छन् भने मात्र १ हजारभन्दा कम मानिसको मृत्यु भएको छ ।
ज्याँदा संख्यामा परिक्षण पनि भएको छैन जापानमा । तर, जापानमा भएको स्वास्थ्य सेवाको सुविधाका कारण मासिनलाई यो महामारीसँग जुँध्न सजिलो भएको छ । सामान्य समस्या हुँदा पनि जापानका मानिसहरुले सस्तो र सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य प्रणालीका कारण उपचार गराउन सफल भएका छन् ।एसिया टायम्सको एउटा रिपोर्टका अनुसार जापानमा हरेक वर्ष निमोनियाका कारण ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुन्छ । जापानमा अहिले २०१४ पछि ६५ वर्षभन्दा माथीका उमेर समुहका मानिसलाई निमोनियाको उपचार निशुल्क गरिएको छ । जापानले यो रणनिति अपनाएपछि २०१७ मा निमोनियाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा भारी गिराबट आएको थियो । २०१८ मा निमोनियाका कारण जापानमा मृत्यु हुनेको संख्या तेस्रो स्थानबाट झरेर पाचौं स्थानमा पुगेको थियो । यसको कारण नयाँ औषधीको खोज र उपचारका सुविधाहरुलाई कारण मानिएको छ ।
बीबीसी ट्राभलको एक रिपोटका अनुसार टोकियोका डक्टर मीका वाशियो भन्छन, ‘सीटीस्केनले निमोनियाको शुरुवाती चरणको पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ र तुरुन्त उपचार सुरु गर्न सकिन्छ । हामीसँग निमोनियाकै बेलामा थुप्रै सुविधाहरुको विकास गरेका छौं । ती उपचार प्रणालीको प्रयोग गरेर हामीले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकेका हौं ।’जापानमा सामुदायीक स्तरमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई नियन्त्रण गरिएको थियो । आफ्नो स्वास्थ्य प्रति जिम्मेबार रहेका जापानका मानिसहरुले कोभिड १९ को प्रभावलाई पनि गम्भिर लिएका थिए । जुन किसिमको स्वास्थ्य संस्कृति जापानमा छ, त्यसले पनि कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नमा मद्दत पुर्याएको देखिन्छ । जापानमा कोरोना संक्रमणको सुरुवात हुनु अगाडी नै मास्क लगाउने संस्कृति थियो । जाडोको समयमा जापानका मानिसहरुले मास्कको प्रयोग गर्थे । जापानी मानिसमा भएका यस्ता थुप्रै बानीहरुका कारण पनि कोरोना भाईरस ज्यादा फैलिनबाट नियन्त्रण भएको हो ।
जापानमा लक डाउन गरिएन् । बरु, मानिसलाई आग्रह गरियो । हावा नआउने ठाउँमा भेला नहुने, भेन्टिलेसन पर्याप्त भएको ठाउँमा मात्रै बस्ने, धेरै संंख्यामा मानिस नबस्ने र सार्वजनिक स्थानमा ठूलो संख्यामा भिड नगर्ने भनेर जापान सरकारले आग्रह गर्यो । गत सोमबार जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जापानी जनतालाई नयाँ जीवनशैली अपनाउन पर्ने र सोचाईमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको घोषणा गरे ।अहिले जापानमा लागु गरिएको स्वास्थ्य आपतकाल हटेको घोषणा भएको छ । तर, सरकारले जनतालाई नयाँ जीवनशैली अपनाएर अगाडी बढ्न आग्रह गरेको छ । विश्वभर लक डाउनले मात्रै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने भनिएतापनि जापानको यो प्रयास भने अरुभन्दा फरकसँगसँगै बढि उपयोगी देखिएको छ ।बीबीसी हिन्दीबाट नेपालीमा भावानुवाद गरिएको